Burma must act now | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » 2010/2012/2015 Election » Burma must act now
Burma must act now
Posted by timothy on Nov 15, 2010 in 2010/2012/2015 Election, Aung San/Aung San Suu Kyi, Myanma News, News, Politics, Issues |3comments
်ရောင်းရင်းတို့ရေ၊ အန်တီစုလဲလွတ်ပြီ။ သန်းရွှေကလဲကမ္ဘာ့နိုင်ငံများကိုမျက်လှယ့်ပြလိုက်တာသူ့ရွေးကောက်ပွဲမဲခိုးလို့စွပ်စွဲတဲ့သီတင်းတွေအတော်ရှားသွားသား။ အန်တီစုကတော့လူထုတောင်းဆိုတဲ့ဒီမိုကရေစီကိုမရမချင်းကိုယ်စွမ်းရှိသမျှလုပ်ပေးမှာဘဲ။ ဒါပေမဲ့လူထုကြီးကလဲကိုယ်ကြိုးစွန့်ပြီးသူ့နောက်ကအတူလက်တွဲပြီးလိုက်နိုင်ဘို့အင်မတန်အရေးကြီးပါတယ်။ အန်တီစုခုလိုနိုင်ငံနဲ့လူမျိုးအတွက်အနစ်နာခံပြီးခေါင်းဆောင်ကောင်းပီသစွာလုပ်ပေးနေတာ ကျနော်တို့အားလုံးအတွက်ကောင်းပေမဲ့၊ဒါတွေဟာသန်းရွှေအတွက်အန်တီစုကိုနည်းမျိုးစုံနဲ့ပြန်ဖမ်းဘို့အချက်အလက်တွေဘဲ။ ဒါ့ကြောင့်လဲ ပြည်သူလူထုအနေနဲ့အန်တီစုကိုကျေးဇူးတင်ချစ်ကြည်ညိုတာမှန်ရင်ဘေးထိုင်မနေဘဲမိမိတို့တပ်အားသရွေ့လေးလုပ်ပေးကြစေလိုပါတယ်။ ကျနော်တို့သိကြတဲ့အတိုင်း သန်းရွှေကတော့ဒီတိုင်းထိုင်ကြည့်နေမှာမဟုတ်ဘူး။တနည်းနည်းနဲ့အန္ဒရာယ်ပေးလိမ္မယ်။ပြန်ဖမ်းမယ်ဆိုတာလဲလူတိုင်းအသိပါ။ လူထုအားနဲ့လဲအန်တီစုနောက်ကနောက်မဆုတ်တမ်းလိုအပ်ရင်အသက်ပေးပြီးတိုက်ကြမယ်။ လူထုကြီးကအန်တီစုနဲ့အတူငြိမ်းချမ်းစွာဆန္ဒပြဘို့လိုနိုင်တယ်။ နောက်တခုက United Nations, ကုလသမဂ်ဂ အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးချုပ် ဘင်ကီမွန်းကိုကျတော်တို့လူထုအားနဲ့ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အရေးမှာဝင်ရောက်ကူညီဘို့စာဝိုင်းရေးနိုငိရင်သူအရေးပေးလာနိုင်တယ်။ လူ၁၀၀၀ ရေးတာနဲ့စာရင်လူ၁၀၀၀၀၀၀ရေးနိုင်ရင်မကောင်းဘူးလား။ ကျနော်တို့ ရွေးကောက်ပွဲအတုမှာပြည်သူတရပ်လုံးမဲမပေးသပိတ်မှောက်တဲ့ကြားထဲက နည်းမျိုးစုံညစ်ပတ်မဲလိမ်ပြီးလူထုဆန္ဒကိုမရတဲ့စစ်အစိုးရ၇ဲ့လိမ်မှုဟာထင်ရှားပါတယ်။ ၁၉၉၀ တုံးကလဲပြည်သူတရပ်လုံးတခဲနက်ရွေးချယ်ပေးခဲ့တဲ့မဲကိုမလေးစားခဲ့ဘူး။ ဒါ့ကြောင့် ဘင်ကီမွန်းကိုစာရေးပြီးမြန်မာပြည်မှာ ၃ ပါတီ- NLD, သန်းရွှေ နဲ့ တိုင်းရင်းသားခေါင်းဆောင်မျးပါဝင်တဲ့- အမျိုးသားပြန်လည်ညီညွတ်င်ြမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲကို ကမကထလုပ်ပြီး အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးရဲ့ကောင်းမွန်သောရုံးအဖွဲ့ရဲ့အာဏာ ( Secretary General`s Good Office Authority), သုံးဘို့လူသန်းပေါင်းများစွာကစာ ရေးဘို့လိုပါတယ်။ http://etan.org/action/contact.htm အဲဒီ ဝက်ဆိုက်မှာ
Secretary General Ban Ki-moon ဆိုတဲ့ စာပိဒ်မှာ Email: ecu@un.org အဲဒီအီးမေးကိုပို့နိုင်ပါတယ်။ ကျနော်ကတော့ဒီလိုရေးပါတယ်။ Dear Secretary General, We know that The ruling Junta released the most popular democracy leader of our time Aung San Suu Kyi from house arrest to alleviate the pressure upon them asaresult of wide-spread ballot rigging in the fake election. It is truely publicity stunt the junta used effectively in the past. Sooner than later, the junta will rearrest Aung San Suu Kyi using their make-shift laws. The Junta had stolen the people will in 1990 election. The Junta had rigged the fake election this year. Can you give the good reason to Burmese oppressed millions in the direct harm way of military not to intervene in the political deadlock and let the people die at the hand of ruthless Junta? Let your moral authority to guide your decision. The waiting is over now. Please use your authority of good office to intervene in this endless deadlock. Please arrange Tripartite meetings of NLD, Gen Than Shwe and Ethnic leaders of Burma. I earnestly request you to do this right thing on behalf of oppressed millions in Burma who had recently been denied the chance to choose their destination. Yours truly, ကိုယ်ကြိုက်သလိုပြင်ရေးနိုင်ပါတယ်။ အန်တီစုနဲ့အတူတိုင်းပြည်အတွက်တပ်အားသရွေ့လေးလုပ်ပေးကြပါစို့။ နောက်ထပ် ကုလသမဂ်ဂ အတွင်းရေးမှုး ဘင်ကီ-မွန်းရဲ့ အီးမေးလ် ကိုဝက်ဘ်လင့်ခ်တခုမှာတွေ့ရလို့ထပ်ဖြည့်ပေးလိုက်ပြန်ပါတယ်။ http://www.un.org/geninfo/faq/faq/faq.html E-mails addressed to the Secretary-General should be sent to inquiries@un.org . လုပ်ထုံးလုပ်နည်းအရကတော့ ရှေလျားပါတယ်။ ဒါပေမဲ့အဲဒီအီးမေးလ်ကိုလဲပို့ကြပါ။ ကျေးဇူးပါဘဲ။
ရေးပို့ လိုက်ပါပြီး။တစ်တပ်တစ်အားနဲ့ တိုင်းပြည်အတွက် စာေ၇းပို့ လိုက်ပါပြီး။
တော်တော်လေးကောင်းတဲ့ Idea ပါ။
Span mail မဖြစ်ရင်တော့ ကောင်းပါမယ်။
spam mail မဟုတ်ပါ။ United Nations ရဲ့တရားဝင်ဝက်ဘ်ဆိုက်တွေကဖြစ်ပါတယ်။အချိန်ရှိတုံးလုပ်စရာရှိတာ၊လုပ်နိုင်တာလေးတွေလုပ်ထားရအောင်ရေးရတာဖြစ်ပါတယ်။ အန်တီစုတယောက်ထဲလဲမလုပ်နိုင်တဲ့လူထုအရေးလူထုကိစ္စကြီးဖြစ်နေတာကြောင့်အားလုံးဝိုင်းလုပ်ကြဘို့ခါတိုင်းအချိန်များထက်ပိုလိုနေပါပြီ။လူများများရေးနိုင်လေ၊တဖက်လူကအရေးထားလေပါဘဲ။ အန်တီစုကဒါမျိုးစည်းလုံးညီညွတ်ကြဘို့ပြောနေတာပါ။